トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Mail kubva nepachinko yokumusoro maturo ari tafura kusarudza
Uri, mune zvebhizimisi e-mail ane nepachinko yaiitirwa, kana ndiye kugutsikana ose nguva, ndinofunga kuti pane zvakawanda iwe kugamuchira shoko kuti vanofunga kuti hazvina kubatsira chaizvo. Muna nepachinko yokumusoro, achitaura kana muri sei kununura mail, Chokwadi, chikonzero chikuru ndechokuti kukwezva vatengi chinangwa, kwete tsamba kuti kuhwina vatengi. Eya, kunyange kudivi kuti akanunurwa, kuti arege kubata Chinangwa nepachinko yaiitirwa, e-mail asingabatsiri Ndinovimba kamwe iwe kurasa kuziva muitiro.
mumabhizimisi e-mail akadai nepachinko yokumusoro, pane zvimwe mapatani.
tsamba kuudza kurwa mweya kuti chabudiswa, kudzima nomwoyo wose nhasi, ndiwo email nechinangwa chete kukwezva vatengi kushanda chinangwa mail, wokupedzisira nechinangwa ziviso yacho chiitiko. In ichi, pane tsamba kuti wakanaka hapana zvikuru Aitondiitira.
Ndicho yechipiri kushanda kunangidzirwa neindaneti pamwe chete nechinangwa zvinokwezva vatengi. In e-mail Mukati dzakadaro, Kutaura nguva dzose kuudza kana kazhinji kusvika, 's masikati uye manheru. Pakati vazhinji na anosvika e-mail rimwe zuva, kuti arege kuverenga zvikuru, ndicho zvemasikati endarira. Kana pasina
mangwanani hwokushanda, nokuti kazhinji kutumira, hazvina haachinji substantially mangwanani uyewo e-mail uye kugutsikana. We Mail kuti akanga nechinangwa zvachose panguva oparesheni chete.
uye manheru ndiyo e-mail, asi kana une hwandaiva bhizimisi iri rinenge nechirevo pamwechete mangwanani tsamba. Kuti afarirwe kuda kushanyira ari manheru vatengi, zvichava tsamba kuti pave kushanya iri chiitiko ruzivo, uye yakafanana zuva.
kunze chiitiko guru, kunaka pasina kutarisa zvikuru. Zvisinei, manheru e-mail zuva chave chiitiko huru, nokuti pane nyaya umo mashoko anokosha anobatsira iri, ndapota edza kuona.
Somuenzaniso, zviziviso, etc. zvinzvimbo chiziviso uye nguva musiyano pakati rakavhurika chikuva pezviziviso uye rotari nzira ndima nzira, muve chinhu. Uyezve, e-mail asingabatsiri chinotevera, e-mail chete kumhanya vavarira, zviitiko Zviri tsamba vachibhejera zvinhu chiziviso.
zvakakwana kuti guru chiitiko pedyo, anogona kutumwa kakawanda, asi haachinji zvikuru kugutsikana nguva dzose. Kamwe Ndakaverenga, chinhu chiri kakawanda pazuva zviri yakachengeteka neindaneti pasina kuverenga pashure.
anokosha mashoko, kazhinji apinda usiku tumira zuva pamberi chiitiko, isinakukodzera chaizvo kwakadaro e-mail panguva dzose bhizimisi. Achitaura kudaro asingabatsiri, e-mail zvinhu uye, mangwanani kana hazvichinji e-mail uye kugutsikana, vanoedza panotaurwa nokuti zvinoburuka kutumira mangwanani tsamba sezvazviri zvakare.
nokuti kusvika tsamba chii na ose zuva, iwe wava pamuedzo kumisa kukurukura uye makavaona chete maturo tsamba. Tsamba akanunura ose zuva, uye kana kunosvika tsamba kana kukosha, iwe Pandakaverenga nzvimbo inofanira kuonekwa mukati vakaramba kumwe vakarongeka kushandiswa zvinobvira.